အာရုံစိုက်ပါ! အခမဲ့ဖုန်းညစ်ညမ်းဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏နာမကိုအမှီဖြစ်ပြီးအလယ်၌အဘယ်သူမျှမကော်မာရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့ဖုန်းများနှင့်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများကိုလက်မခံပါ၊ထို့ကြောင့်မှားယွင်းသောကြော်ငြာများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကို ၀ င်ရောက်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ သို့သော်ငါတို့သည်သင်တို့အဘယ်သူမျှမငွေပေးချေမှုနှင့်ပူးတွဲပါကြိုးနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာကစားနိုငျသောညစ်ညမ်းဂိမ်း၏ကြီးမားသောစုဆောင်းခြင်းရှိသည်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်မည်သူမဆိုမတောင်းဆိုပါ၊သင်ဘာမှမဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်တော့ပါ၊သင်၏ဖုန်းသည်ဤဂိမ်းများကိုပြေးရန်လိုအပ်သည်။ သင်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်,ဤသူအပေါင်းတို့သည်အိုင်ကွန်၅ ဂိမ်းရင်းသင့်ဖြစ်ကြ၏. အဲဒါတွေတော်တော်ရှိတယ်။, ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာဂိမ္းေတြကိုရွာေဖြရင္းနဲ႔ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြနဲ႔ စမ္းသပ္ရင္းနဲ႔ အန္းဒ႐ိုနဲ႔ အိုင္ဖုန္းႏွစ္လံုးေပၚေအာင္ေဆာ့ရင္းနဲ႔ေဆာ့ရင္းနဲ႔ ဂိမ္းေတြ၊ေဆာ့ရင္းနဲ႔ အခ်ိန္ေတြကုန္လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြမွာဒီစုေဆာင္းမႈကိုအတူတူထားခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါဂိမ်းမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ဖို့ထင်နေကြတယ်,ဒါပေမယ့်သင်ကြိုတင်သူတို့ကိုစမ်းသပ်ကြဘူးလျှင်အမှားများပေါ်ပေါက်စေခြင်းငှါ,.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏စာကြည့်တိုက်တစ်ဦးအမြန်တစ်ကိုယ်တော်အစည်းအဝေးအဘို့မိမိတို့လက်ပေါ်မှာဖုန်းနှင့်အချို့သောအချိန်နှင့်အတူမည်သူမဆိုစိတ်တော်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်မည်သူမဆိုများအတွက်ဂိမ်းများ၊အဘယ်သူမျှမကိစ္စသူတို့ဖြောင့်ယောက်ျားတွေသို့မဟုတ်မိန်းကလေးများ၊လိင်ဂိမ်းအတူအမှုအရာတက်မြိန်ဖို့ရှာဖွေနေစုံတွဲများ၊လိင်တူချစ်သူသို့မဟုတ်လိင်နှစ်မျိုးလုံးယောက်ျား၊လိင်တူချစ်သူအမျိုးသမီးသို့မဟုတ်ပင်ရှမ်းအမျိုးသားများ။ ဤသူသည်သင်တို့ဝဘ်ပေါ်ရလိမ့်မယ်ကြောင်းအများဆုံးပါဝင်နိုင်မိုဘိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အဆုံးသတ်ထားသောသားမွေးများအတွက်ဂိမ်းများကိုပင်တပ်ဆင်ထားသည်၊ကျွန်ုပ်တို့တွင်အမျိုးမျိုးကိုဖျက်စီးခြင်း၊ဒိုမီနိုများနှင့်သူတို့၏ကျွန်များအတွက်ရွေးချယ်ခြင်းတစ်ခုလုံးရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုအမျိုးမျိုးသည်ဤဂိမ်းအဘို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြတယ်ဘယ်သူကိုမှကန့်သတ်သည်မဟုတ်။ ငါတို့သည်လည်းအားလုံးကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းစတိုင်များနှင့်အတူလာမယ့်နေသောဂိမ်းအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏အရိုးရှင်းဆုံးဂိမ်းပဟေဠိသူတွေကို,ကာစီနိုညစ်ညမ်းဂိမ်းများနှင့်ကဒ်စစ်တိုက်ဂိမ်းဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကဟန်းနီးမွန်းတွေပါ ၀ င်ပြီးအချို့ကတော့ကျော်ကြားတဲ့ဝတ်လစ်စလစ်ဆုလာဘ်တွေနဲ့လာနေတယ်။ အဆိုပါကဒ်စစ်တိုက်ဂိမ်းကုန်းပတ်ထဲမှာသူရဲကောင်းများအဘို့အမျိုးအင်အားကြီးနှင့်အတူအားလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံဖြစ်ကြသည်။
သင်ရုံအချို့ဖြောင့်ရှေ့ဆက်လိင်အရေးယူပျော်မွေ့ချင်လျှင်,သင်တို့သည်ငါတို့၏လိင်ခကျြတစျခုလိုအပ်ပါတယ်. ယခင်အပိုဒ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်လူတိုင်းအတွက်ဂိမ်းများရှိသည်။ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဂါၤတစ်စုံတစ်ရာအတွက်အနည်းဆုံးတော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဂါၤတွေ၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဂါၤတွေ၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဂါၤတွေ၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဂါၤတွေ၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဂါၤတွေ၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဂါၤတွေ၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဂါၤတွေစတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းသင်လိုချင်တဲ့ဇာတ်ကောင်မဆိုကြင်နာဖန်တီးပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာအကြီးအကျယ်စိတ်ကြိုက်မီနူးနှင့်အတူဂိမ်းတစ်ခု(ယောက်ျား၊မိန်းမ၊အကူးအပြောင်း၊အကူးအပြောင်း၊အကူးအပြောင်း၊ရှောင်၊စသည်တို့ကို။ ထို့နောက်သင်ဖြစ်လိုသည့်အရာကိုရွေးနိုင်သည်။ ဤသည်ကစုဆောင်းမှု၏အရှိဆုံးလွယ်ကူဂိမ်းစေသည်။
သင်ရုံကောင်းတစ်ဦးပုံပြင်ချင်တဲ့အခါကျနော်တို့စာသားကိုအခြေခံပြီးဂိမ်းကိုဆက်ကပ်။ နှင့်စိတ်မပူပါနဲ့၊ဤအော်ရီဂွန်ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုကဲ့သို့သောစာသားဂိမ်းများမဟုတ်ပါ။ ဤရွေ့ကားအခြေခံအားဖြင့်သင်အရေးယူပေါ်ပေါက်လာပုံကိုထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူအဓိကဇာတ်ကောင်၏ရှုထောင့်မှပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်အရာဂရပ်ဖစ်ဝတ္ထုဖြစ်ကြသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့လိင်အရေးယူနှင့်ကောင်းမွန်သောဇာတ်လမ်းလိုင်းနှစ်ဦးစလုံးကိုဆက်ကပ်ကြောင်းဂိမ်း၏အမျိုးအစားရှိသည်,အရာအရပျ,ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်. အရင်ကဆိုဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကစားဖူးရင်အာထရာဆောင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ သင်တစ်ဦးကြက်ဆင်စိတ်ကြိုက်ပြီးတော့သင်တစ်ဦးစွန့်စားမှုအပေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီစုဆောင်းမှုထဲမှာလည်းပွင့်လင်းတဲ့မြေပုံတွေနဲ့ဂိမ်းတွေရှိတယ်၊သူတို့ကသင့်ကိုလူမှုရေးအရရောလိင်အရပါအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့သူနဲ့မတူညီတဲ့ဇာတ်ကောင်များစွာပါ ၀ င်တယ်။ အဲဒီမှာဒီဂိမ်းထဲမှာပင်မော်ကွန်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ကြပြီးကျနော်တို့ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့,တစ်ဦးညစ်ညမ်းဆိုက်ပေါ်မှာဆိုရင်ကြောင့်ဆုရှင်အရှုံးသမားမှရရှိသွားတဲ့။
ငါစကား၌ထားသောအခါ,စုဆောင်းခြင်းကယ့်ကိုကြီးမားခြင်းနှင့်စျေးကြီးနှစ်ဦးစလုံးအသံပါဘူး။ ဒါေပမယ့္စိတ္မပူပါနဲ႔။ ဒါဟာနေဆဲသင်တို့သည်နောက်မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူပျော်မွေ့နိုင်အခမဲ့ညစ်ညမ်းဆိုက်ရဲ့ထိပ်ပေါ်မှာ,အသစ်ဂိမ်းတစ်ခုတည်းအပတ်တိုင်းဒီစာကြည့်တိုက်ထဲမှာတင်ပါလိမ့်မည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤအကြောင်းအရာပူဇော်ရာအပေါ်ဆိုက်ကိုလည်းလွန်ကဲကဲဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိရောက်စွာကြည့်ရှုဘို့လိုအပ်သမျှသောအင်္ဂါရပ်များရရှိမည်ဖြစ်သည်;, သငျသညျအဆုံးမှအဆုံးစာဝှက်စနစ်နှင့်မျှမတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာမူဝါဒအပါအဝင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအင်္ဂါရပ်များအများကြီးရ,သင်တို့ရှိသမျှသည်အခြားသောကစားသမားများနှင့်အတူအပြန်အလှန်နိုင်သည့်မှတဆင့်အသိုင်းအဝိုင်းကိရိယာများကိုလည်းရ။